I-Odisha Tour Spritual | Vakashela amathempeli amahle ka-Odisha
I-Odisha Engokomoya Yokuvakasha
I-Odisha yizwe elinamafutha ahlanzekile angokomoya, futhi iyiphi indlela engcono yokubhekana nalokhu ngaphandle kohambo lwe-Odisha ngokomoya. Izinhlanzi zesihlabathi zilokhu zigcizelela ukubaluleka okuphawulekayo kwezimo ezibucayi zokuvakasha ezingokomoya zika-Odisha. Izintelezi ezitholakala kuMbuso zibonakaliswa emaphakheji wezokuvakasha ayingqayizivele ahlelwe yinkampani. Amaphakheji acacisa ngokucacile ukuboniswa okungokomoya okukhanyayo kuka-Odisha. 'Ukuvakasha kwe-Odisha ngeThempeli' ngempela kuyisikhathi sesikhathi sokuphila esihlinzekwa yiSand Pebbles. I-'Bhubaneswar Special Tour 'ibonisa abavakashi ukuthi baphelele amaparele angcono kakhulu angokwenyama eThekwini City. Nalawo amanye amaphakheji okuvakasha okomoya awakhukhulayo ahlanganisa uPuri, Konark, Chilika, Bhitarkanika, noSimilipal. Iphakheji lePuri-Mangalajodi-Gopalpur-Chandragiri kanye neBhubaneswar - Puri - Barkul - Gopalpur - iphakheji iphakamisa umoya wezivakashi. Izikhungo zokuvakasha zokuthula eziseKolkata - iGasasagar - iSundarbans nazo ziboshwe nge-finesse ukuze zenze uhambo olukhangayo lokuya eNdiya.
Izinhlanzi zesihlabathi zenza konke okusemandleni ukuqiniseka ukuthi izivakashi zithola amathuba amaningi okuvula izibopho zabo zangaphakathi futhi zithole isipiliyoni sokuvula amehlo ngezimpahla zethu zokuvakasha ezingokomoya. Izinhlanzi Zesihlabathi azishiyi ukuthungwa ngamatshe ukuze zinikeze izivakashi ukuthi zithokozise ngokuzijabulisa ezindaweni ezihambelayo ezokuvakasha ezise-Odisha ezithinta kakhulu
I-Odisha Tour ngezifanekiso
Iphakheji le-Bhubaneswar-Konark-Puri Tour